LUDO STAR ကို Download လုပ်ပြီး Install : 2017 (သစ်) PC ကို IN (WINDOWS တွေ 7,8/10 OR M က
LUDO STAR ကို Download လုပ်ပြီး Install:
Ludo စဉ်စမတ်ဖုန်းဂိမ်းများကိုသမိုင်းများတွင်ထုတ်လုပ်သောလူကြိုက်အများဆုံးဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာပါကစ္စတန်တူသောအာရှနိုင်ငံများအတွက်အလွန်ရေပန်းစားသည်, အိန္ဒိယ, သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ, နီပေါ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့်စသည်တို့ကို. အားလုံးအသက်အရွယ်အုပ်စုသည်လူတို့အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ကယ့်ကိုပျော်စရာင်ကြောင်းဒီဂိမ်းများအတွက်အကြီးမားဆုံးအယူခံတစ်ခုမှာ. သင်ချင်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဒီဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်. မကြာသေးမီကအသစ်တခု Ludo စတား 2017 android ဖုန်းဂိမ်းဖြန့်ချိ. ကြောင့်ဒီဂိမ်း၏ကျော်ကြားမှုမှဒီ app ကအရမ်းကျော်ကြားဖြစ်လာသည်နှင့် Google Play စတိုးအပေါ်ကြီးမားထိခိုက်တယ်.
ဂိမ်းရဲ့အရွယ်အစားပဲဖြစ်ပါတယ် 14.8 MB နဲ့သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဖိတ်ခေါ်နိုင် facebook ကနေ login ရန်လိုအပ်ပါတယ်. သင်တို့သည်လည်းကွဲပြားခြားနားသောအပွောငျးအလဲအခြားကစားသမားများနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်. သင်သာ android devices များပေါ်ဒီဂိမ်းကိုကစားနိုင်သည်ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်မ. သင်သည်လည်းငါတို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြရန်သောနည်းလမ်းကိုသုံးပြီး PC မှာဒီဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်.
ကျပန်းကစားသမားနှင့်အတူ Play 2-4 ပွဲ
သင်နှင့်အတူဆော့ကစားသင့်သူငယ်ချင်းများဖိတ်ခေါ်ရန် facebook မှ Login
ကွဲပြားခြားနားသောအပွောငျးအလဲ Play: ဂန္ထဝင်, မာစတာသို့မဟုတ်လျင်မြန်စွာ
အပိုင်းပိုင်း၏ double, သတ်ဖြတ် 1 နေအိမ်စသည်တို့မဝင်ခင်နှင့်အများကြီးပို
သငျသညျဒီကနေဂိမ်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် link ကို
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ PC ပေါ်မှာကစားရန်လုပ်ဖို့လိုအပ်သမျှရုံတစ်ခုဟာ android device ကို emulator ဖြစ်ပါတယ်.
android emulator များအတွက်လင့်များရှိလိမ့်မည်
သင်ကစားပွဲနှင့်ဤ emulator မဆိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးနောက်ဒီတော့သင့်ရဲ့ PC ပေါ်မှာဤ emulator မဆို install လုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်, သင်သည်သင်၏ emulator အပေါ် apk ဖိုင်ကို install လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်ထက်. တဖန်သင်တို့ပြီးနောက်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို setup ကိုပစ္စည်းပစ္စယဖြည့်စွက်. နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင် pc ပေါ်မှာကစားရန်သင့်ဂိမ်းကိုခံစားနိုင်ပါတယ်.
သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိသည်သို့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တစ်ခုခုလွဲချော်သည်ဟုမထင်ပါလျှင်, ကိုယ့်ကိုအကိုအောက်တွင်မှတ်ချက်များအတွက်သိစေ. သင့်ရဲ့ opionion ထားခဲ့ဖို့အခမဲ့ခံစားရ. သင်အမှန်တကယ်ဟာ android emulator မှတဆင့် Mac ကို PC ပေါ်မှာ Windows ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ဂိမ်းကစားပျော်မွေ့မျှော်လင့်ပါတယ်.
အားကစားပြိုင်ပွဲ	ဒေါင်းလုပ် ludo ကြယ်ပွင့်ဂိမ်း, လက်ပ်တော့အဘို့အ ludo ကြယ်ပွင့်ကို download, ပြတင်းပေါက်အဘို့အ ludo ကြယ်ပွင့်ကို download 7, လက်ပ်တော့အဘို့အ ludo ကြယ်ပွင့်, pc အခမဲ့ download ပြုလုပ် ludo ကြယ်ပွင့်, pc အွန်လိုင်းများအတွက် ludo ကြယ်ပွင့်, ပြတင်းပေါက်အဘို့အ ludo ကြယ်ပွင့် 10, ပြတင်းပေါက်အဘို့အ ludo ကြယ်ပွင့် 7	bookmark
ယခင်အပိုဒ် Pros & ဝန်ထမ်းများစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး၏ Cons
next ကိုပုဒ်မ PC ကွန်ပျူတာစာ Booster ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးအင်စတောလုပ် (WINDOWS တွေ 7,8/10 သို့မဟုတ် Mac)